जीवनशैली Archives - Page3of 16 - Tudikhel - Nepal's Popular Digital NewsPaper
आपतमा जनगायक जीवन शर्मा : शान्ता चौधरीले गरिन् सहयोगको अपिल
काठमाडौं । जनगायक जीवन शर्मा यतिबेला ठूलो पीडामा छन् । जीवनभर जनताका दुख, पीडा र मुक्तिका गीत गाउने यी जनगायकलाई यो दशैंमा सोच्दै नसोचेको दशा आइ लाग्यो । खाना खानेक्रममा मासुको हड्डीले अन्न नलि छेडेर उनका जेष्ठ सुपुत्र सिकिस्त बने । अहिले उनका छोरा अमृत आचार्यको मनमोहन कार्डियो महाराजगन्जमा उपचार भइरहेको छ । जीवनभर आर्थिक लोभ नगरी जनताको गीत गाउँदै हिंड्ने जीवन शर्मालाइृ यत्तिखेर छोराको उप...
विश्व महाशक्तीको रुपमा उदयीमान गणतान्त्रिक मुलुक चीनको राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपालको दुई दिने भ्रमण आज अपराह्र हुँदैछ । यी शक्तिराष्ट्र गणतान्त्रीक चीनको राष्ट्रप्रमुखको हैसियतको पहिलो भ्रमण भने होइन । यसभन्दा अघि चीनका विभिन्न राष्ट्रप्रमुखले भ्रमण गरेका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि २३ वर्ष पछि समृद्धी र शक्तिशाली छिमेकी मुलुक चीनको राष्ट्र प्रमुखले भ्रमण गर्नु नेपाल जस्तो अल्पविकसित मु...
काठमाडौँ । आदिवासी तमुहरूको छाता सङ्गठन तमु ह्युला छोंज धिं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्को आयोजनामा तमुको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । छोंज धिंले काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको जानकारी अनुसार यही असोज २४ र २५ गते हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हालसम्म १७ भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिहरूले सहभागी हुने निश्चित भएको छ । छोंज धिंका अध्यक्ष रेसम गुरुङले दिएको जानकारी अनुसार...
दसैंको टीका उत्तम साइत बिहान १०:३५ बजे
काठमाण्डौ, १९ असोज । यस वर्ष बडा दसैं टीकाको उत्तम साइत बिहान १० बजेर ३५ मिनेटमा रहेको छ । पञ्‍चाङ्ग निर्णायक समितिले सार्वजनिक गरेको साइतअनुसार विजयादशमीका दिन बिहान १० बजेर ३५ मिनेट टीका ग्रहणका लागि उत्तम समय हो। विजयादशमी २०७६ असोज २१ गते मंगलबार परेको छ। घटस्थापनाका लागि समेत गत १२ गते बिहान १० बजेर ३५ मिनेटकै समय उत्तम रहेको थियो । ...
खोटाङमा विश्वकै अग्लो यलम्बरको प्रतिमा बन्दै, यायोक्खाले हस्तान्तरण गर्यो आधिकारीक तस्विर
काठमाण्डौ ११ असोज । किरात शासनकालका प्रथम राजा यलम्बरको विश्वकै अग्लो प्रतिमा खोटाङमा बन्ने भएको छ । सय फिट अग्लो पूर्णकदको प्रतिमा रुपाकोट मझुवागढी¬ १४ बुइपामा बन्न लागेको हो । प्रतिमा निर्माणका लागि किरात राईहरुको साझा संस्था किरात राई यायोक्खाले निर्माण पक्षलाई शुक्रबार आधिकारीक फोटो हस्तान्तरण गरेका छन् । किरात राई यायोक्खा केन्द्रिय कार्यालय कोटेश्वरमा हस्तान्तरण कार्यक्रम गरि ...
तपार्इँ खेतबारीमा काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ? आफ्ना घर वरिपरिका झाडी सफा गर्दै हुनुहुन्छ ? अथवा मुसाका बासस्थानतिर केही काम गर्दै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोला । कतै मुसाको टोकाइबाट अकालमा तपाईँको मृत्यु पनि हुनसक्छ । पछिल्लो समय मुख्यरूपमा मुसाको टोकाइ र सङ्क्रमणबाट मानवमा लाग्ने स्क्रब टाइफस नामक रोगको सङ्क्रमण अधिकांश जिल्लामा फैलिएको छ । कीटजन्य रोग व्यवस्थापन गर्ने इपिडिमियोलोजी तथा...
लिम्बू भाषाका ११ र १२ कक्षा पढाई सुरु
पाँचथर । खलंगाटार माविमा यस शैक्षिकशत्रबाट लिम्बू भाषाको कक्षा ११ र १२ सञ्चाकन हुने भएको छ । फिदिम नगरपालिका वडा नं १० अध्यक्ष तथा खलंगाटार माविका अध्यक्ष बिना थाम्सुहाङ्को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । हाल सो विद्यालयमा कक्षा १ देखी ८ कक्षा सम्म अध्यन अध्यापन भइरहेको छ । कक्षा ११ र १२ का लागी शिक्षक श्यामबहादुर जबेगु र बिबि थाम्सुहाङ ९सुगम०लाइ तोकिएको छ । लिम्बू भाषा...
किन रोकियो जिब्रो छेड्ने जात्रा ?
भक्तपुर, २९ भदौ । गत वर्ष भाद्र शुक्लपक्ष पूर्णिमाको दिन राति ८ बजे मध्यपुरथिमि नगरपालिका दिगु भैरव मन्दिरको मण्डपमा मध्यपुरथिमि–५ चोडेका ४० वर्षीय बालकराम श्रेष्ठले जिब्रो छेडे । विसं २०६३ देखि रोकिएर यो जात्राले गत वर्ष पुनर्जीवन पाएपछि अब हरेक वर्ष निरन्तर जात्रा सञ्चालन होला भन्ने आशा यस वर्ष फेरि म¥यो । जिब्रो छेड्ने व्यक्ति तयार नभएपछि यस वर्ष फेरि यो जात्रा रोकिएको छ । जिब्रो ...
तीर्थयात्री हेलिकप्टरबाट मानसरोवर कैलाश जान थाले
रसुवा, २७ भदौ । जिल्लाको पासाङल्हामु राजमार्ग अवरूद्ध भएपछि मानसरोवर तीर्थ जाने यात्रु हवाई मार्गबाट स्याफ्रुबेँशी जान थालेका छन् । मानसरोवर कैलाश यात्राका लागि स्थलरूपमा सवारी साधनद्वारा जान सकिने एक मात्र उत्तरी नाका रसुवागढी पुग्न रसुवाको भूभागमा राजमार्ग अवरूद्ध भएपछि हेलिकप्टरमार्फत यात्रुलाई काठमाडौँबाट स्याफ्रुबेँशी लान ल्याउन थालिएको ट्रेकिङ कम्पनीहरूले बताएका छन् । मानसरोवर यात्...
स्वास्थ्य जोखिम बढेपछि अमेरिकामा ई-चुरोट उत्पादनमा प्रतिबन्ध
इसाम अहमद वासिङ्टन, २६ भदौ । संयुक्तराज्य अमेरिकाले सुगन्धित ई–चुरोट (विद्युतीय चुरोट) को सेवनबाट स्वास्थ्य जोखिम बढेको भन्दै त्यस्ता वस्तुको उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । खासगरी किशोरहरुबीच निकै लोकप्रिय भइरहेको यस चुरोटले फोक्सोमा समस्या आउने गरेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । सुगन्धित ई–चुरोटको कुलतमा फसेका किशोर किशोरी युवावस्थामा पुगेपछि सूर्तिजन्य ई–चुरोट सेवन गर्नेतर्फ...